Volley-Ball - faritra faha-7 :: Tafita hiatrika famaranana ny ekipan’ny Zandarimaria • AoRaha
Volley-Ball – faritra faha-7 Tafita hiatrika famaranana ny ekipan’ny Zandarimaria
Adin’ny Malagasy sy Maorisianina ny famaranana. Ny zandary sisa no hany ekipa malagasy tafavoaka hiatrika ny lalao famaranan’ny fiadiana ny amboaran’ny Faritra fahafito.
Nomontsanin’ny GNVB, ekipa tompondakan’i Mada- gasikara, tamin’ny seta 3 noho 0 (25/17 25/19 25/11) omaly, ny Faucon Flacq Camp Ithier avy ao Maorisy.
Nanjaka tanteraka ary tsy voatohana mihitsy ry Andry Be nandritra ny fifaninanana manontolo. “Tombony ho anay ny traikefa. Ny service-n’ny mpifanandrina no somary nanahirana anay fa nahomby hatrany kosa izahay tamin’ ny fanafaingananany fanafihana. Isan’ny nimasoanay ny nifehy sy nitazona ireo mpilalao efatra tena nahianay fa hanahirana” ,hoy ny mpanazatran’ny zandary, Razafinjatovo Honoré na Nore kely.
Efa tratra ihany ny tanjona dia ny hiatrika ny manasa-dalana ny JSA na dia lavo teo amin’ny io dingana io aza. Niondrika teo anatrehan’ny Olympic Montagne Goyaves tamin’ ny seta 3 noho 0 (25/17 25/23 25/23) mantsy ity ekipa laharana fahatelo eto Madagasikara ity. Nahery teo amin’ny fiarovana ny vahiny ary nanova paikady ihany koa satria mpanafika hafa mihitsy, tsy toy ny tany amin’ny finanintsanana no tena nampiasain’izy ireo. Hiady ny famaranan’ny sokajy lehilahy izany ny GNVB sy ny Olympic Montagne Goyaves.
Hotontosaina anio kosa ny manasa-dalan’ny sokajy vehivavy, ka hifandona amin’ny 3 ora tolakandro ny Bi’AS sy ny Orange club d’amitié an-daniny ary an-kilany ny Quatre Bornes VBC maorisianina sy ny Anse Royal, avy any Seisela. Amin’ny alahady avokoa no hanaovana ireo lalao famaranana.
Baolina kitra – CAN 2021 Mamaramparana ny fandrafetana ny lisitr’ireo mpilalao i Nicolas Dupuis
Basket-ball – Africa League Hifandona voalohany amin’i Maraoka ny GNBC
Baolina kitra – Fenitra kianja Hotsarain’ny manam-pahaizan’ny Fifa ny fotodrafitrasan’i Barikadimy
Fiainana atleta Sivy amby roapolo taona nikatrohana volley-ball i Andry Be
Baolina kitra -Analamanga :: Hifandona indray ny AS Adema sy Elgeco Plus
Lomano -Analamanga :: Homena vahana eny Itaosy ireo katitakely